Football Khabar » ‘गोल मेसिन’ हल्यान्ड भित्र्याउने नजिक युभेन्टस : तलब कति ?
‘गोल मेसिन’ हल्यान्ड भित्र्याउने नजिक युभेन्टस : तलब कति ?
इटालियन क्लब युभेन्टस यो समयका चर्चित युवा फरवार्ड अर्लिङ हल्यान्ड अनुबन्धको नजिक पुगेको छ । इटालियन मिडियाका अनुसार युभेन्टसले नर्वेजियन खेलाडी हल्यान्डलाई अस्ट्रियन क्लब रेड बुल साल्जबर्गबाट अनुबन्ध गर्ने तयारी गरेको हो ।
हल्यान्डका एजेन्ड मिनो राइओला र युभेन्टसका अधिकारीबीचको छलफलबाट मोटामोटी समझदारी जुटेपछि सरुवाका धेरै कुरा सहमतिनजिक पुगेको खबर इटालियाका पत्रिकाले छापेका छन् । १९ वर्षका युवा खेलाडी हल्यान्डलाई युभेन्टसले भविष्यमा प्रमुख खेलाडीको स्थान दिने गरी अनुबन्ध गर्न लागेको छ ।
युभेन्टसले हल्यान्डका लागि साल्बर्गलाई ३० मिलियन युरो सरुवा फी तिर्नेछ । यता, क्लबमा अनुबन्ध भएपछि हल्यान्डले बोनसबाहेक तलब मात्रै प्रतिसिजन ३.५ देखि ४ मिलियन युरोसम्म पाउनेछन् ।
जारी सिजन घरेलु लिग र च्याम्पियन्स लिगमा पनि धमाकेदार प्रदर्शन गरेका उनले टिमका लागि कूल २२ खेलबाट २८ गोल गर्दै ४ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । च्याम्पियन्स लिग मात्रै उनले यो सिजन ६ खेलबाट ८ गोल गरे । तर, रेड बुल अन्तिम ३२ बाटै आउट भसकेको छ ।
हल्यान्डको अनुबन्धपछि युभेन्टसको आक्रमण लाइनमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँगै पाउलो डिबाला र हल्यान्डको सेट उत्कृष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यता, इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि हल्यान्ड अनुबन्धका लागि कम्मर कसेर लागेको छ ।
प्रकाशित मिति ८ पुष २०७६, मंगलवार १३:०४